FAALLO:-Inta Cudurku kuu jiro ayaa Caafimaadkuna Kuujira
March 23, 2015 - Written by Puntland Fox
Waxaa Mahad oo dhami u sugnaatay Allaha Awoodda leh ee ina abuuray oo weliba inaga abuuray abuur tii ugu wanaagsanayd islamar kaasina inoo dhammays tiray lixaadkaeena marka laga reebo dadka uu allaha awoodda lihi ugu talo galay in lagu waana qaato ee aanu lixaad kooda u dhammaystirin.
Waxaa loo baahanyahay inaynu ku mahadino eebaha weyn ee awoodda leh ee sidaasi inoo abuuray isla markaasina abuurideena inoogu daray caafimaad qab iyo caqli fiyoobi.
Caafimaadku waa halbowlaha nolosha qofkuna haduusan caafimaad qabin horumar ma gaadhi karo himiladiisii oo dhanna halkaas ayay ku ekaanaysaa ilaa inta uu ka heleyo caafimaad uu hore ugu dhaqaaqo.
Muwaadin maarkaad dhex lugaynayso gudaha magaalooyinkeena waxaa indhahaagu qabanayaan boco iyo qashin caafimaadka wax weyn udhimi kara oo dhexyaalla suuqyada iyo goobaha laga adeegto haba u badnaadeen xaafadaha isku raranta ahi eh.
Si’aan u helno bulsho caafimaad qabta waa inaan dhexda u xidhanaa sidaan uga shaqayn lahayn nadaafadda deegaankeena waa inaan la shaqaynaa oo ku garab istaagnaa u heelanayaasha nadaafaddeena iyo kobicnta caafimaadkeena sida Wasaaradda Caafimaadka iyo Dawladaha hoose ee Gobollada Puntland.
Aan umidowno dabar goynta waxyaabaha caafimaad darrada inoo keenaya inagoo ilaahay kaashanayna kuna kalsoon uheelanayaasha caafimaadkeena oo ay ugu horayso Wasaaradda Caafimaadku aana ku garab istaagno sidaan uga midha dhalin lahayn nadaafadda waddankeena oo dhan miyyi iyo magaalaba.
Waxaa jirtey odhaah caan baxday oo ah “Inta Cudurku kuu jiro ayaa Caafimaadkuna Kuujira” haddaba inakoo taa ka duulayna waa inaynu iska fogaynaa waxyaabaha caafimaad darrada inoo keenaya hadday tahay qashinka ka samaysma hadhaaga cuntada aynu cunno ama waxyaabaha kale oo aynu adeegsano iyo daawooyinka aan tayada lahayn amaba dhacay ee aynu isticmaalno.
Guntii iyo geba-gebadii dhammaan muwaadiniinta sharafta iyo karaamada leh ee reer Puntland waxaan talo ahaan ugu soo jeedinayaa inay dardar geliyaan ol-olaha kobcinta caafimaadka Puntland iyagoo ka faa’iideysanaya hoggaanka suubban ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha Dawladda Puntland oo u horseeday Puntland horumar iyo Barwaaqo ku dhisan isku tashi iyo wax wada qabsi.
Xafiiska Warfaafinta, Wacy-gelinta, Hiddaha Iyo Dhaqanka ee Madaxtooyada Puntland.